Yonwabela eyona midlalo mihle xa uhamba ngemoto Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 918
Ngaba ulungiselela uhambo olude kunye nosapho lwakho ngemoto? Ngaba awuyazi into omawuyenze ukugcina abakhenkethi bekonwabisa? Iya kuhlala ilukhetho olufanelekileyo ukukhangela kwaye ufunde Imidlalo xa uqhuba.
Uhambo olude lomgama luyadinisa, ke ngoko ukuphazamiseka okuhle kuya kwenza uhambo lube mnandi ngakumbi kwaye ngokukhawuleza. Ndiyakuncoma dibana kwaye ufunde imidlalo eliqela, ukuze iintsana zingabhideki ngokulula. Masiqalise!
Eyona imidlalo ilunge ngakumbi xa uqhuba
Okulandelayo, ndiza kukubonisa ukukhethwa kweyona midlalo idumileyo yokuhamba kweemoto, endikulungiselele yona, ngakumbi wena:
Ukhetha ntoni? Okanye ungathanda?
Sisicelo se-Android. Umdlalo iqulathe ngokujonga iindlela ezimbini ezahlukeneyo esikrinini yefowuni okanye iThebhulethi kwaye kuya kufuneka ukhethe enye yazo.
Xa uphendula, uya kufumana ipesenti yabadlali abakhethe impendulo nganye kwezi.
Ukhetha ntoni? yi Umdlalo olula kakhulu kwaye uyonwabisa. Ihlala isabelwana nabazali, abantakwabo, abantakwabo, izihlobo okanye amaqabane ezimoto afuna ukuba nexesha elimnandi.
Umdlalo olungileyo kwiihambo ezinde kunye nokuchitha ixesha ngokukhawuleza. Imalunga Isicelo somnxeba kwaye asidingi unxibelelwano lweintanethi.
Umdlalo uqulathe tshintshiselana kwaye udibanise iilekese Ukudlulela kumakhulu amanqanaba eli thuba le-puzzle emnandi.
Kulomdlalo uchitha iiyure ungayifumani, kuba, kumanqanaba athile kuya kufuneka uphumeze ukuqonda kwakho konke, okuwenza umlutha.
Abadlali abanakulilibala kwaye bacinge ngendlela yokohlula. Oku kubangela ukuba babe nexhala, elinokuphinda bakhululeke ukuba badlala kwakhona.
Amabali amnyama / amabali aphantsi
Lo ngumdlalo wekhadi oguqulela iSpanish kwi "Tales Black / Tales Purple." Kuyo, omnye wabathathi-nxaxheba kufuneka afunde i-enigma kwaye bonke abanye abadlali bayayicombulula ngemibuzo okanye ewe okanye hayi.
Kukho iinguqulelo ezimbini, enye eyenzelwe abantu abadala apho ixesha elininzi kukhona umntu onxulumene nokufa, ngenxa yoko igama. Uhlobo olujolise kumntwana luya kuthetha izidalwa zentsomiIindawo ezingafunwayo, iivampires, phakathi kwezinye. Kule game ungabandakanya umqhubi ukwenza ukuba kube mnandi ngakumbi kwaye kuphilile.
Umdlalo wesintu kwaye ulungele iihambo ezinde, ezibandakanya umntu bonisa into kwaye uthi "Ndiyabona ndiyabona". Utshintshiselwano ngezimvo kufuneka luqale phakathi komntu okhethe into, kunye nabanye abadlali abaya kuzama ukuyithelekelela.
Abanye abadlali Bakujonga indawo abahlala kuyo ukuze baveze ukuba kungayintoni na, kwaye ngubani okhethe isixhobo kufuneka abaxelele ukuba ingaba siso okanye akunjalo. Umntu ophumeleleyo uya kuba ngulowo ukhetha into elandelayo.
Umdlalo omnandi kakhulu othandwayo wabantu abadala kunye nabantwana. Kusenza ukuba sicinge kancinane kwaye sonwabe ngexesha lolu hambo losapho. Inento yokwenza naluphi na uhlobo lweentsomi kubo bonke abantu abahamba uhambo.
Iintsomi zinokuba zeziphi na isifundo, kwaye bhabha iingcinga zethu ukwenza isisombululo sakho sibe nzima ngakumbi. Nabani na oqiqayo, uyaqhubeka nale ntsomi.
Kuyavela ukuba ngumdlalo omnandi kakhulu, uqukwa Thetha igama kwaye abanye baya kutshatisa amabinzana asengoma.
Kuyinto elungileyo ukwenza phakathi kwamalungu amaninzi kunye nokuseka amaqela ngokuchaseneyo. Bayakuba nexesha lokonwaba phakathi kokuhleka kunye neengoma.
Umdlalo wepatent (iipleyiti)
Omnye wabahlali khetha ileta kwaye abanye mabahambe bejonga amalungelo awodwa omenzi wechiza lweemoto ezibonisiweyo. Owokuqala ukufumana ilungelo elilodwa lomenzi wechiza elinobumba uya kuphumelela.
Ungadlala ngamanani, ubeke umceli mngeni wokuba ngowona ukhawulezayo ukubetha.
Umdlalo odlalwa ngokulula, odlalwa ngokulula nonikeza ulonwabo olungalinganiyo. Omnye wabahlali emotweni Cinga ngomlinganiswa odumileyo, abanye kufuneka bafumane ukuba ungubani, ebuza kuphela imibuzo esibhozo. Banokuphendula kuphela ngokuthi "ewe" okanye "hayi".
Ukuba umdlali akaphumeleli ukuqikelela umlinganiswa, ithuba liya kumdlali olandelayo, onokuthi abuze imibuzo yakhe. Nabani na oqiqayo umntu ofunayo, uza kuphumelela ukubetha kwaye ungavula umjikelo omtsha.
Yiyo umdlalo webhodi omangalisayo, efanelekileyo yokudlala ekhaya inokufumaneka kwifomathi efanelekileyo yokuhamba.
Ngumdlalo apho umdlali ngamnye azama ukufumana amanqaku ngam Ukwakhiwa kwamagama ebhodini 15 × 15 izikwere.
Amagama anokwakheka ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo. Unokuwela ukuba zivela nje kwisichazi magama.
Lilonke kukho iithayile eziyi-100, ezingama-98 ziphawulwe ngoonobumba kwaye zambini ezingenanto (ngaphandle kwamachaphaza, zisebenza njengamakhadi asendle kwaye zisetyenziselwa ukubuyisela oonobumba).
Inento yokwenza nokubuza ilungu elihamba emotweni ukuba libekhona Yenza igama lebali. Ke, wonke umntu makongeze isivakalisi esinye de bangabe besazi ukuba sithini.
Ukwenza ukuba ukonwabisa ngakumbi, kuyacelwa ukuba ukwenze ngokukhawuleza, ukwenza izicengcelezo ezininzi kangangoko. Lo mdlalo awulungelanga ukulandela i-oda emiselweyo.
Ngaba iyathandwa umdlalo wokuqonda, ilungele ukuchitha ixesha kwiihambo ezinde nabantu abaliqela. Inabantu ababini okanye abangaphezulu abathatha itshati ngokuthe tye kwaye bayisahlula kwiibhokisi ezininzi zinezi mpawu zilandelayo:
Ileta / igama / ifani / ilizwe / isilwanyana / iziqhamo-Ukutya / umbala / isinxibo-into / isiqu / iyonke
Ukuqala umdlalo Misa, umntu uza kuthetha ileta kwaye abantu ngepensile mabagcwalise la macandelo ngonobumba obonisiweyo. Umntu wokuqala ukugcwalisa iibhokisi kufuneka akhwaze STOP kwaye abanye banokuma kwaye bangakwazi ukubhala iimpendulo ezininzi.
Ukuba umdlali unempendulo ekhethekileyo, fumana amanqaku e-100. Ukuba impendulo ilingana neyomnye umdlali, ufumana amanqaku e-50.
Ekugqibeleni wonke umntu ufanele yongeza amanqaku afunyenwe kwibhokisi nganye ubhale yonke into kwibhokisi iyonke. Ngubani ekupheleni komdlalo oqokelele awona manqaku uya kuba yimpumelelo.
Inomdla umdlalo wokugcina abancinci endlwini ukonwabisa. Umntu uqala ngegama kwaye aba badlali balandelayo baya kuqhubeka namagama aqala ngokuvumelanisa kwegama eligqithileyo.
Umzekelo ungaqala ngo "isaqhwithi", kwaye okulandelayo kunokuba yindebe, izihlangu, isiselo, uhadi, njl.
Kwincinci elincinci lendlu ungasebenzisa unobumba wokugqibela, baya kuba lula. Oku umdlalo awunasiphelo, Masidlale iiyure ngokonwaba okukhulu.
Ngokufana nomdlalo uSimon uthi, kule meko ngamagama. Iqulethwe kuloo nto omnye umdlali uthetha igama elinye kwaye omnye uyaqhubeka nokongeza elinye njalo njalo.
Icebo kukukhumbula onke amagama ukongeza amatsha, ulahle umdlali ongalunganga kwaye ulibale amanye awo.
Ngumdlalo ogqwesileyo, ofanelekileyo ukuba udlale phakathi kwabantu abaliqela, omnye wabo Iya kuba ngumsolwa kunye nabanye abacuphi.
Umrhanelwa uya kujongwa ngabacuphi umzuzu, apho kufuneka inkcukacha zonke iimpawu. Emva koko abacuphi kuya kufuneka bavale amehlo abo kwaye umrhanelwa atshintshe ezinye zeengubo ezifana nokukhulula iqhosha.
Emva kokwenziwa kotshintsho, abacuphi bavula amehlo abo kwaye baqalise ukuqikelela ukuba yintoni tshintsha umsolwa owenziweyo.
Umcuphi oqikelela utshintsho olwenziweyo Iya kuba ngumrhanelwa omtsha. Kulomdlalo umqhubi wesithuthi akakwazi ukuthatha inxaxheba, kujongwe iimeko zomdlalo.
Umdlalo ogqwesileyo osisiseko somdlali othi "Ndipakisha ibhegi yam ndithatha ...", uze ugqibezele isivakalisi ngokufaka.
Umdlali olandelayo kufuneka aphindaphinde izinto esele zikho kwityesi efanelekileyo ngokuchanekileyo kwaye kuya kufuneka ongeze into entsha.
Njengoko umdlalo uqhubeka ulonwabo luya kukhula luzama khumbula zonke izinto kunye nolungelelwano olufanelekileyo. Ulahlekile olibala naziphina izinto.
Isutikheyisi ihlala itshintshiselana ngengxowa yenkunkuma, kwaye izinto ezingathandekiyo okanye ezingenangqondo zinokongezwa.
Lo mdlalo uya kuba mnandi kakhulu, ngokuqinisekileyo uya kuba nokuhleka kunye novuyo kuhambo. Umdlali ophambili kufuneka anike imiyalelo yokuba isela leeleta lipake emotweni.
Isela leeleta linikezelwe ukubela iikhonkrithi ezikhethekileyo, kwaye ikhonkrithi kuthiwa ayinakubizwa. Ileta u-A izakuqala ukunyamalala, emva koko ngu-E, mna, u-U no-U.
Into enzima kukuba uqale uthethe ngaphandle kokukhupha isandi sesonkamisa, xa sele belahliwe baya kuba nzima ngakumbi. Lo mdlalo phuhlisa izakhono zokuthetha zabantwana abancinci, ngokuqinisekileyo ukhetho olukhulu.
Okokugqibela, ndincoma ukuba ulungiselele imidlalo yakho yokuziphindezela kwiintsuku ngaphambili ukuze usapho lonke lukhethe iindlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa. Olu khetho lwe imidlalo xa uqhuba, Iya kukukhupha ngaphandle kwengxaki kwaye ugcwalise uhambo olude noludinisayo ngokuzonwabisa.
1 Eyona imidlalo ilunge ngakumbi xa uqhuba
1.1 Ukhetha ntoni? Okanye ungathanda?
1.3 Amabali amnyama / amabali aphantsi
1.4 Ndiyabona ndiyabona
1.6 Ingoma ka…
1.7 Umdlalo wepatent (iipleyiti)
1.10 Balisa amabali
1.11 Misa umdlalo
1.12 Amagama atyunjiweyo
1.13 USimon wamazwi
1.14 Umcuphi kumavili
1.16 Isela elixokayo
I-9 ephezulu: Imidlalo yokuzonwabisa xa sonwabile